जब कुकुर आफै को’रोना विशेष अस्पतालमा भर्ना भयो. – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/जब कुकुर आफै को’रोना विशेष अस्पतालमा भर्ना भयो.
काठमाडौं । अहिले विश्वभर फैलिएको को’रोना म’हामा’रीका कारण विश्वभर अ’स्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको अ’भाव सिर्जना भएको छ । नेपालमा पनि अ’स्पतालमा बेड नभएपछि स्कुलमा लगेर उपचार थालिएका समाचार आइरहेका छन् ।भारतमा पनि यो अवस्था छ । तर भारत बिहार राज्यको पटनामा भने एक फरक दृश्य देखिएको छ । यहाँको नालन्दा मेडिकल कलेज अ’स्पताल (एनएमसीएच) लाई को’रोना समर्पण अर्थात को’रोना सं’क्र’मितहरुको मात्रै उपचार गर्ने अ’स्पताल बनाइएको छ । केवल को’रोनाबाट पीडित बि’रामीहरूको यहाँ उप’चार भइरहेको छ ।
एकातिर, १०० भन्दा बढी बि’रामीहरू यस अ’स्पतालबाट स्वस्थ भएर घर फर्केका छन्, अर्कोतर्फ, अ’स्पतालमा ला’परबा’हीका कारण प्र’कोपको जो’खिम बढेको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारमा कुकुरहरू एनएमसीएच आर्थोपेडिक वार्डमा घुम्ने गरेको खुलासा भएको छ । आ’वारा जनावरहरूलाई अ’स्पताल प्रवेश गर्नबाट रोक्ने कोही छैन ।
कुकुरहरू अ’स्पतालमा ओछ्यानमा छन् । अर्कोतर्फ, अ’स्पतालमा नगर निगमले राखेको डस्टबिनमा पीपीई किट र मास्कहरू फालिएका थिए । धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूले किटलाई प्रयोगमा पालीब्यागमा राख्नुको सट्टा खुला ठाउँमा फालिदिन्छन् ।
यसले धेरै व्यक्तिहरूमा संक्रमण बढाउन सक्छ । यद्यपि अ’स्पताल व्यवस्थापनले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मास्क र पीपीई किट प्रयोगपछि पोलीब्याग प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीहरू जसले पीपीई किटहरू प्रदान गर्दछ यसले पनि पोलीब्याग प्रदान गर्दछ ।
किट प्रयोग गरिसकेपछि, यसलाई पोलीब्यागमा राख्नु पर्छ । कम्पनीका मानिसहरू अ’स्पताल आउँछन् र किट डिस्पोजल गर्छन् । भारतमा कोरोना सं’क्र’मितहरुको कुरा गर्ने हो भने अहिले संख्या ८१ हजार पार गरेको छ । को’रोनाका कारण ज्या’न गु’मा’उनेहरुको संख्या २,६०० भन्दा धेरै हुँदा निको भएर फर्कनेहरुको संख्या भने २७ हजार भन्दा धेरै रहेको छ ।एजेन्सी